ကဗျာချစ်သူ (ခေးရော့စ်): သြော်.....အလှတရား
ကျွန်မတို့ အများစု သတ်မှတ်ထားတဲ့ အလှတရားက ဘာလဲ? ပြစ်မျိုးမှဲ့ထင် အလှပိုင်ရှင်ကို လှတယ်ပြောတာလား?............မဟုတ်သေးဘူး.... ဒါဆို......ကြေးရတတ် ပညာတတ်တစ်ယောက်ရဲ့ အရှိန်အ၀ါကသူ့ရဲ့အလှလား?........မဖြစ်နိုင်သေးဘူး........ ကဲ........သူ့ရဲ့ မျိုးရိုးဂုဏ်ရှိန်က သူ့အလှကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပြယုဂ်လား?..........မထင်ပါဘူး.......... သို့သော်လဲ..............ကျွန်မတို့အများစုက ဒီပတ်ဝန်းကျင် ဒီနွံထဲမှာ ရုန်းကန်ရင်း၊ နစ်မွန်းရင်း၊ ရှင်သန်ရင်းနဲ့ပဲ ဘ၀ကို ဖြတ်သန်း နေကြတယ်။ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ လောကကြီးမှာ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပဲ ဖက်တွယ်ရင်း အဖိုးတန်တဲ့ ရတနာတစ်ပါး"ခင်မင်မှုသံယောဇဉ်"ဟာတည်မြဲခြင်းကို ဆောင်နေတယ်ဆိုတာ မေ့သလိုတောင်ဖြစ်လို့။ စစ်မှန်တဲ့ "True Friendship" ကရှားတယ် ....မများဘူး..... ရရင်လဲတစ်သက်စာပဲ..........
ဒိုးတူပေါင်းဖက်၊ အချစ်မပျက်တဲ့"သံယောဇဉ်ကြိုးမျှင်"တွေနဲ့မွမ်းမံထားတဲ့ အလှတစ်ပါးလေ........ ရိုးရှင်းလွန်းတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းတွေ "သတိရတယ်" "နေကောင်းအောင်နေနော်" "လာလည်ချင်တယ်" "ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်အုံး" ဆိုတာလေးတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းကို မှတ်မှတ်ရရပြောဖြစ်တာ..................... မအားတဲ့ကြားက သူငယ်ချင်းကို သတိတရ စာရေးမယ်၊ ဖုန်းဆက်မယ်... ကိုယ့်ရဲ့ဂရုစိုက်မှုကို သှူ့ဆီ ကူးစက်စေသလို ကိုယ့်ကိုလဲ သူဂရုစိုက်နေပါလား ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကျွန်မချစ်သော သူငယ်ချင်းများစွာအတွက်..........................ပြီးတော................msg တစ်ကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အားပေးစကား တစ်ခွန်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဝေဖန်စာလုံးလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မသူငယ်ချင်း တွေဆီကဆိုရင် ကျွန်မရဲ့အားဆေးတစ်ခွက်ပါ။ ဒီအလှတရားလေး မပျောက်ပျက်ဖို့၊ ရေရှည်တည်တန့်ဖို့ ကျွန်မတို့အားလုံး တာဝန်ရှိတယ်နော်..................
Posted by Chaos at Thursday, October 18, 2007
tayzar October 18, 2007 at 4:28 PM
အားပေးသွားပါတယ်။ ဆက်ရေးပါဗျို့။ အမြဲတမ်းဘလောခ့်ရေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
chaos October 18, 2007 at 5:21 PM